ဇော်မင်းသန်း: gmailနှင့်gtalkအကြောင်း | Thinks For Visit ကိုဥာဏ်မွန်
ဆောဝဲ နှင့် နည်းပညာ စုဆည်းရာ
Android root နည်း
အသစ်များကို FB မှာဖတ်ချင်ရင် Like ခြင်းဖြစ် အားပေးပါ။
Gtalk Voice and Video Call ကို Desktop ပေါ်မှာပဲ သုံးမယ်
ကွန်ပြူတာ Desktop ပေါ်မှာပဲ Gtalk ကို Video Call သုံးချင်သူတွေအတွက်ပါ။ သူကတော့ ချက်တင်လည်းရပါတယ်။ရေးနေတုန်းမှာ မြန်မာလိုမပေါ်ပေမဲ့ enter ခေါက်ပြီး ပို့လိုက်ပြီးရင်ပေါ်ပါတယ် တဖက်က ကရေးတာတာလည်းအကုန်မြန်မာလိုမြင်ရပါတယ်။ ကျနော်ပြောတာမရှင်းရင် ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီကောင်လေးက လည်းဂျီတော့လိုပဲကောင်းပါတယ်။ လတ်တလော Video call ချင်သူတွေ Gmail ၀င်ပြီး ဆောဝဲ ထည့်ပြီး မှ ခေါ်လို့ရတယ် အခု ဒီဆောဝဲလေးကပို အဆင်ပြေတာပေါ့ Gmail လည်းဝင်စရာမလို Desktop
မှာပဲ sign in ၀င်ပြီး အမြန် သုံးလို့ရတာပေါ့ ဖိုင် size ကလည်း 1.5mb လေးပါပဲ။ အရင်ကလည်း တင်ပေးဖူးပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံးထွက် Update လေးကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
မှတ်ချက် : account type: Jabber ကို ကလစ်ပြီး Gtalk ကိုပြောင်းလိုက်ပါ...။ပြီးမှ sign in ၀င်ပါ။
ဇော်မင်းသန်း Gtalk Voice and Video Call ကို Desktop ပေါ်မှာပဲ သုံးမယ်
Gmail & Gtalk ထဲမှာ ကိုယ့်ကို သူများက ဘလော့ထားလား သိနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ
ref : http://www.zwmnna.com Gmail & Gtalk ထဲမှာ ကိုယ့်ကို သူများက ဘလော့ထားလား သိနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ
ကိုနားဆင်တဲ့သီချင်းတွေ gtalk သူငယ်ချင်းကို လည်းနားဆင် ရအောင် လုပ်သောနည်းလေး..။
မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ..။
Windows Media Play>>>>>Tool>>>Options>>>Plug-ins>>>Backgroung
အထိဝင်ပြီးတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း အမှတ်ပေးပြီးတော့ Ok လုပ်လိုက်ပါ အဲဒါဆိုရပါပြီ တစ်ဖက်နားထောင်မယ်ဆို Gtalk call လုပ်လိုက်ပါ ကိုယ်က လက်ခံလိုက်ရင် ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့သီချင်း တစ်ဖက်က ကြားရပါပြီ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းရင် နားထောင်ရအဆင်ပြေပါတယ် ..။
သူငယ်ချင်းတယောက်မေးထားတာနဲ့ ကိုအမျိုးကောင်းသား ဆိုက်မှ ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြ ထားလိုက်ပါ သည်....။အားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်......။ ကိုနားဆင်တဲ့သီချင်းတွေ gtalk သူငယ်ချင်းကို လည်းနားဆင် ရအောင် လုပ်သောနည်းလေး..။
ကွန်ပြူတာ Desktop ပေါ်မှာပဲ Gtalk ကို video call သုံးချင်သူတွေအတွက်ပါ...။သူကတော့ ချက်တင်လည်းရပါတယ် ...။ရေးနေတုန်းမှာ မြန်မာလိုမပေါ်ပေမဲ့ enter ခေါက်ပြီး ပို့လိုက်ပြီးရင်ပေါ်ပါတယ် ဟိုကရေးတာတာလည်းအကုန်မြန်မာလိုမြင်ရပါတယ်...။ကျနော်ပြောတာမရှင်းရှင် အောက်မှာ ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ...။ဒီကောင်လေးကလည်းဂျီတော့လိုပဲကောင်းပါတယ် .လတ်တလော video call ချင်သူတွေ gmail ထည်းဝင်ပြီး ဆောဝဲ ထည့်ပြီး မှ ခေါ်လို့ရတယ် အခု ဒီဆောဝဲလေးကပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ Gmail လည်းဝင်စရာမလို Desktop မှာပဲဆင်းအင်ဝင်ပြီး အမြန် သုံးလို့ရတာပေါ့ ဖိုင် size ကလည်း 1.5 mb လေးပါပဲ...။ဖလန်းဖလန်းလေးပါ ကြိုက်ရင်တော့အောက်ကလင့်မှာယူသွားပါ...။.
မှတ်ချက်....။အပေါ်မှာရေးဖို့မေ့သွားလို့ account type: Jabber ကို ကလစ်ပြီး Gtalk ကိုပြောင်းလိုက်ပါ...။ပြီးမှ sign in ၀င်ပါ
ဆောဝဲကို ဒီမှာ ယူပါ.....။ အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ အနော်မျှော်လင့်ပါတယ်........။ေိေိ......။
G-talk နဲ့Mobile ဖုန်းခေါ်မယ် ....... Posted by ဇော် မင်း သန်း
နိုင်ငံ ၃၀ ကို gtalk ကနေ အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ...အသုံးပြုနည်းကတော့ ....1. Google Talk ကိုဖွင့်ပါ။2. ကိုယ်ဆက်ချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပုံမှန် gtalk address တွေကို Add သလိုပဲ add လုပ်ပါ။3.
အဲလိုရိုက်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံကုဒ်၊ ဒေသကုဒ်တွေကို ပါထည့်ပေးရပါမယ်။ gmail.com နေရာမှာ talkster.gtalk2voip.com ကို ပြင်ဆင်ရိုက်ထည့်ပေးပါ။(phonenumber@talkster.gtalk2voip.com)ဥပမာ: for UK, use 442071234567@talkster.gtalk2voip.com or for USA , use 12125551212@talkster.gtalk2voip.com4.Talkster
မှ ပေးပို့တဲ့ confirmation ကို instructions တွေနဲ့ အတူ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
တဘက်မှ သင်ဆက်သွယ်ချင်တဲ့သူသုံးဖို့ local Talkster number တစ်ခုကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အဲဒီနံပါတ်ကို ဖုန်းပြန်ခေါ်ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ မရှင်းတဲ့ သူတော်တော်များများရှိလို့ ထပ်ပြောပြပါမယ်။ အဲဒီ နံပါတ်က ကိုယ့် ဂျီတော့အိုင်ဒီကို အဲဒီသူက အဲဒီနိုင်ငံကနေ ဖုန်းပြန်ခေါ်လို့ ရအောင် စီစဉ်ထားတာပါ။ Call back system သုံးဘူးတဲ့သူဆို သိပါတယ်။ကိုယ်က ဒီကနေ ခေါ်လိုက်တာနဲ့ သူ့ဖုန်းမှာ အဲဒီ နံပါတ်ပေါ်ပါတယ်။ဆယ်စက္ကန့်ပြီးလို့ ကျသွားတာနဲ့ သူက အဲဒီ နံပါတ်ကို ပြန်ခေါ်လိုက်ရုံပါပဲ။လွယ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူ့ဖုန်းမှာ နံပါတ်မပေါ်ရင် ကိုယ်က တနည်းနည်းနဲ့ ပို့ပေးပေါ့ဗျာ။ ဂျီမေးလ် ကိုတော့ အမြဲ အွန်ထားဖို့ လိုပါမယ်။5.
တကယ်လို့ mobile phone ကိုဆက်တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်, သူ့အနေနဲ့ SMS ကတစ်ဆင့် သင့်ကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန် Talkster call-in number တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မရသေးဘူးဆိုရင် Talkster number ကို IM ဒါမှမဟုတ် email နဲ့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Make calls from your Google Talk1. Google Talk Contact List က ကိုယ်ဆက်ချင်တဲ့ နံပါတ်ကို select လုပ်ပါ2. Call button ကို Click လုပ်ပြီး စတင်ခေါ်ဆိုပါ။3. Talkster က သင်ဆက်သွယ်လိုတဲ့ နံပါတ်ကို gtalk ကတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။4.
တကယ်လို့ တဘက်လူက ဖုန်းကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူစကားပြောဖို့ အားရဲ့လား ဆိုတာကို စစ်ဆေးဖို့ 10 secondsအချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ဖုန်းချပြီး သင့်အတွက် ရထားတဲ့ Talkster local phone number ကို ပြန်ခေါ်ခိုင်းပါ။5. သူပြန်ခေါ်တာကို စောင့်စားနေပါ။ (တကယ်လို့ သူပြန်ခေါ်ရမယ့် သင့်နံပါတ်ကို မသိသေးဘူးဆိုရင် တစ်နည်းနည်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးပို့ပါ)6. သူပြန်ခေါ်တဲ့ အချိန်ကစပြီး သင့်အနေနဲ့ ကြိုက်သလောက် စကားပြောဆိုလို့ ရပြီဖြစ်ပါတယ်။7. ပြီးသွားရင် ဖုန်းချလိုက်ရုံပဲပေါ့။8.
တဘက်လူကို အဲဒီ Talkster call-in number လေးကို သိမ်းထားဖို့ သတိပေးပါ။ သူက သင့် Google Talk ကို ဖုန်းနဲ့ခေါ်ဆိုလိုတိုင်း အဲဒီ နံပါတ်ကို အသုံးပြု
ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ။no catches, no limits, and no conditions! လို့ သူတို့က ဆိုထားပါကြောင်း။စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ဒီlist ထဲမှာ စင်ကာပူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပါမလာပါဘူး ...ဆက်သွယ်လို့ ရတဲ့ နိုင်ငံ ၃၀ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။Country name Country code Dialing codeArgentina AR +54Australia AU +61Austria AT +43Belgium BE +32Canada CA +1Chile CL +56China CN +86Czech Republic CZ +420Denmark DK +45El Salvador SV +503Finland FI +358France FR +33Germany DE +49Hong Kong HK +852Hungary HU +36Ireland IE +353Israel IL +972Italy IT +39Latvia LV +371Lithuania LT +370Luxembourg LU +352Mexico MX +52Netherlands NL +31Norway NO +47Peru PE +51Poland PL +48Romania RO +40Slovakia SK +421Slovenia SI +386Spain ES +34Sweden SE +46Switzerland CH +41United Kingdom GB +44United States US +1Helpful Hintsဒီ
service လေးကို သုံးဖို့ တဘက်လူမှ Caller ID ကိုဖွင့်ထားပေးဖို့လိုပါမယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ တဘက်ကလူကို အဲဒီ service မှ မှတ်မိသိရှိပြီး ဆက်သွယ်ပေးနေတာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ login တွေ password တွေမလိုတဲ့ လွယ်ကူစွာ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ။အသေးစိတ် သိလိုသေးရင်တော့ www.talkster.com ကို သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ZEALOT မှကူးယူပါတယ်။
G-talk နဲ့Mobile ဖုန်းခေါ်မယ် ....... Read more »
talk ကနေ မိမိနှင့် အဆင်မပြေသူကို မိမိဘက်က Block သို့ Remove လုပ်လိုက်ရင် မိမိဘက်ကသာ သူ့ကိုမမြင်ရတော့ပေမယ့် မိမိ Block သို့ Remove လုပ်လိုက်တဲ့သူရဲ့ Gtalk မှာတော့ မိမိနာမည်ရှိနေသေးတဲ့အတွက် သူ့ဘက် Chat လို့ရပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က Block လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ Gtalk List မှာ ရှိနေဦးမှာပါ.။ အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် အပြီးအပိုင် သံယောဇဉ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးအတိုင်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး Gmail ကို ဖွင့်ပါး။ ပြီးရင် Contacts ကို ရှာပြီး Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအခါ Contacts Box ကျလာရင် မိမိ Delete လုပ်ချင်သော Account ကို ရွေးပြီး အမှန်ခြစ်ကာ Delete contact ကို click နှိပ်လိုက်ပါ။ တကယ်ဖျက်မှာလားလို့မေးတဲ့ Box ကျလာရင် OK ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို မိမိမဆက်သွယ်လိုသူကို အပြီးအပိုင် သံယောဇဉ်ဖြတ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီ။ သူ့ရဲ့
Gtalk မှာလည်း မိမိအမည် မရှိတော့သလို သူ့ Gtalk မှာလည်း ကိုယ့်အမည် ကျန်ရှိတော့မည် မဟုတ်တော့ပါ။ Gtalkမှာသေခန်းပြတ်blockနည်း
GMAIL မှားယွင်းဖျက်မိသော...concact များကိုပြန်လည်၇ယူခြင်း
Gmail တွင် မှားယွင်း ဖျတ်မိသော… contact များကို ပြန်လည်ရယူခြင်းဒီနည်းလမ်းဟာ contact တွေကို ဖျက်လေ့ဖျက်ထ ရှိသော သူငယ်ချင်းများအတွက် အသုံးဝင်မယ် လို့ထင်ပါတယ်..Gmail တွင် မှားယွင်းဖျက်မိတဲ့ contact များကို အောက်ပါ အတိုင်း အဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့် ပြန်လည်ရယူနိုင် ပါတယ်..မိမိ Gmail အား Standard ဖြင့် log in ၀င်ရပါမည်။ Basic Html ဖြင့် log in ၀င်ပါက မရပါ။Step 1Gmail တွင် Log in လုပ်ပြီး ဘယ်ဘက် ထိပ်နားရှိ contact ကို နှိပ်ပါStep 2Contact တွင် အပေါ်ညာဘက်နားရှိ More actions Menu ကို နှိပ်ပါ။Step 3ပေါ်လာတဲ့
menu မှာ Restore contacts ကိုနှိပ်ပြီး…..နှစ်သက်ရာ အချိန်ကို သတ်မှတ်ကာ Restore contatct ကိုနှိပ်ပါ။ နှစ်သက်ရာ အချိန်ကို သတ်မှတ်ကာ Restore ကိုနှိပ်ပါ။အချိန် ကာလ အနေနဲ့ ရက် ၃၀ လောက်အထိ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်..
အထက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းက မှားယွင်းဖျတ်မိတဲ့ contact တွေကို ပြန်လည် ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်လေ ip address သိဘို့ လိုအပ်ခဲ့ရင် ဒီနည်းလေးက အထောက်အကူပြုမှာပါ။ မိမိဆီလာတဲ့ အီးမေးလ်ကို ဘယ်ကလာသလဲ ရှာကြည့်မယ်
မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမှ Gmail account လုပ်နည်း Posted by ဇော် မင်း သန်း
ပည်တွင်းက သူငယ်ချင်းများအတွက် အသုံးဝင်မယ့် နည်းလမ်းလေးမို့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေရင်လည်း အချင်းချင်း လက်တို့လိုက်စေချင်ပါတယ်။ အကောင့်ဖွင့်ရတာ မခက်ပါဘူး။ ကျပ် ၉ထောင် ပေးစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖွင့်လုိ့ရတဲ့ နည်းလမ်းရှိပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ Gmail account ရှိပြီးလျှင်သော်၎င်း၊ မရှိလျှင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီး ကိုယ့် Email ကို ပြန်၍ Invite လုပ်ပါ။ [ Gmail ထဲက ဘယ်ဖက် Invite ဆိုတဲ့အကွက်မှာ လုပ်ပါ!
Account Create Page ပေါ်လာရင် လိုအပ်တာတွေဖြည့်စွက်ပါ။ (First Name, Last Name, Username, D.O.B, Security Question စသည် ဖြည့်လိုက်ပါ။
သတိ** Security Question မှာ ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ရှောင်ပါ။ Secondary Email ကို ကိုယ့်သူငယ်ချင်းရဲ့ Email သို့မဟုတ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အရင် Gmail အဟောင်းကို ဖြည့်ပေးပါ။
ဆိုတဲ့ နေရာ မြန်မာပြည်ကလွဲလို့ တခြား နိုင်ငံတွေကို ရွေးလိုက်ပါ။ စမ်းသပ်ချက်အရ- Thailand, Laos, Australia, Cambodia, Sri-Lanka, India စတဲ့နိုင်ငံတွေကို ရွေးပါ။ United States, UK, Japan, , Russia, Korea, China ,malaysia,စသော နိုင်ငံတွေကိုရှောင်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမှ Gmail account လုပ်နည်း Read more »
Gmail စာမျက်နှာကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံပြောင်းနည်း..။
Google ကတော့လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ဒီတခါကိုယ့်Gmail စာမျက်နှာကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့Background လှလှလေတွေပြောင်းလို.ရနေပါပြီ။လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့..........၁။မိမိ Gmail Account ကို Sign in အရင်ဝင်ပါ။၂။Settings ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ၃။Themes ကိုကလစ်နှိပ်ပါ(ပုံတွင်ပြထားသည်)၄။မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပုံပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။၅။City တွင် yangon ထည့်ပါ။Saveနှိပ်ပါ။
Gtalk ကို တစ်ခုထက် ပိုသုံးရမယ့် အခြေအနေမျိုး ကြုံတတ်ပါတယ်။ဥပမာမိမိမှာAccountနှစ်ခုရှိခဲ့ရင်၊အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ခုထက်ပိုသုံးချင်ရင် ဒီလိုလေးလုပ်ထားလိုက်ပါ။1.Gtalk icon ပေါ် right click/properties ကိုသွားပါ။2.gtalk properties dialog box မှ shortcut ကိုသွားပါ။3.Target box မှာ"C:\_Program Files\_Google\_Google Talk\_googletalk.exe"/startmenu ဒီစာသားကိုတွေ.ပါလိမ့်မည်။4.startmenu ဆိုတဲ့စာသား(အနီရောင်ပြထားသောစာ)ကိုဖျက်ပါ။5.ထိုစာသာနေရာတွင် nomutex ကိုထည့်ပါ။6.Ok နှိပ်ပေးပါ။ လိုသလောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပြီး ကြိုက်သလောက်ခေါ်နိူင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှ gtalk အကောင့်ဖွင့်ရန် အခက်ခဲ ဖြစ်နေကြသူများ
လုံးဝ စိတ်ညစ်နေစရာမလိုပါ ။ အောက်မှာဖေါ်ပြထားသော နည်းအတိုင်းသာ လုပ်လိုက်ပါ ။ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည် ။ အရင်ဆုံး မြန်မာပြည်ကဆိုရင် ဒါလေးအရင် ဒေါင်းယူထားလိုက်ပါ
Sept 1. ဒီနေရာလေး ကနေ Sing In ၀င်လိုက်ပါ ။ Sing In ၀င်ပြီးသွားရင် Step 2. Google Voice mail ထဲမှာ GetaVoice number (or) UPGRADE ကို နှိပ်ပါ။ ( Upgrade you account box ) ကျလာပါမည် ) ။
UltraSurf လိုမျိုးပေါ့ မရှိသေးရင် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ..။
gtalk မှာ ကိုယ်နားထောင်နေတဲ့ သူချင်းလေးကို ပေါ်နေစေချင်ရင်
Gtalk မှာ ကိုယ်နားထောင်နေတဲ့ သူချင်းလေးကို ပေါ်နေစေချင် ရင် တော့…ဒီလိုလေး လုပ်လိုက်ပေါ့……..
window media player ရဲ့ view menu ကနေ plag in ကိုဝင်ပါ…အဲဒီကမှ option ကိုသွားပါ….back ground ကို ကလစ်လုပ်လိုက်နော်… အဲဒီကမှ googletalk music plug in ကို ticket ပေးလိုက်ပါ… ပြီးရင် window media player ကို ပိတ်ပြီး သီချင်းကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ………. gtalk ရဲ့ status message နေရာမှာလဲ show current music track ကို ပေးထားလိုက်ပါက window media နဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းလေးက gtalk မှာ သွားပြီး ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်………….
အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ..။ gtalk မှာ ကိုယ်နားထောင်နေတဲ့ သူချင်းလေးကို ပေါ်နေစေချင်ရင်
အကောင့်ဖွင့်ပြီး.သူငယ်ချင်း လက်ခံတာ အခြေအနေရပါ..ရေးပေးသမျကို ဖတ်ပြီး ပြန်မရေးပေးနိင်တာ မအားလို့ပါBusy+Busy= Super Busy အွန်လိုင်းမှာတွေရင်လဲ ဂိမ်းဆော့နေလိုမအားပါတဲ့အသစ်နဲ့တွေပီးချက်တယ် ကြူကာသူကစကားသာချွဲ နင်လိုကောင်မျိုးငါ၇ွံပါတယ် နောက်ဆိုရင်အနားမလာနဲ့ အသဲဆိုတာ1ခါကွဲပြီးရင်နာသွားတယ် နာတဲ့အတွက်ရောင်သွားတယ် ရောင်တဲ့အတွက်အသဲကကြီးသွားတယ် ကြီးတဲ့အတွက်နောက်1ယောက်ပိုဆန့်သွားတယ်!!!!! မအားပါ..ဘယ်သူကိုမှပြန်မချက်ပါ..အကယ်ရ်ျသင့်ကိုပြန်ချက်လျှင်VIP ဟုသတ်မှတ်ပါ.. VIP=very ignore person..VIP=နလိန်ပိန်းတုံး.. ဟိုဟာပြောလည်း သိတယ် ဒီဟာပြောလည်းသိတယ်နဲ့ မင်းမသိတာတခုပဲရှိတော့တယ် အလိုက်ကန်းဆိုး အချစ်ဆိုတာဘာလဲလို့ လာမမေးနဲ့ ငါ့အဘိဓာန်မှာ အဲ့ဒီစာလုံးပျက်နေလို့ ငါကိုယ်တိုင်တောင် ဖတ်မရခဲ့တာကြာပေ့ါ... တယ်လီဖုန်းတွေမှာ ကြိုးမပါတော့ဘူး။ ကင်မရာမှာ ဖလင်မပါတော့ဘူး။ Computer တွေမှာ floppy မပါတော့ဘူး။ လူတွေမှာ အကြင်နာတရား မပါတော့ဘူး။ စကားလုံးတွေမှာ အမှန်မပါတော့ဘူး။ ဘာ........!!!!!!
အမုန်းတွေမရှိတဲ့ နယ်မြေသစ်ကို တို့နှစ်ယောက် အတူသွားချင်တယ်။ ဟုတ်လား ????? အဲဒီမှာ...အမုန်းတင်မကဘူး အဲဒီမှာ စားစရာလဲ မရှိ သောက်စရာလဲမရှိဘူးဟဲ့.... သွားချင်ရင်နင်ပဲသွား ...... :P သူဝမ်းနည်းတဲ့အခါ မင်းပါဝမ်းနည်းနေ၇သလား? သူ့၇ဲ့နာကျင်မှုတွေအတွက် အပြင်ပန်းကမဟုတ်တောင် စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီး ငိုကျွေးခဲ့၇သလား? အဲဒါ အချစ်လေ..............။ မင်း၇ဲ့မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်နဲ့ မင်း၇ဲ့၇င်တွင်းခံစားချက်တွေကိုသူမြင်နိုင်၇ဲ့လား?ဒါမှ အချစ်လေ...........။ လိုရင်ဖုန်းဆက်သည် မလိုရင်မုန်းတတ်သည်........... သင့်ကို
WOW ဆော့နေရင်းပြန်ချက်သူသည် သင့်အား အင်မတန်မြတ်နိုးသူဖြစ်သည်.... သင့်ကို Warsong Battle ဖြစ်နေစဉ် ပြန်ချက်သူသည် သင့်အားအသက်မကတန်ဖိုးထားသူဖြစ်သည်.. ထို့ကြောင့် Gamer များကို သစ္စာရှိပါ..... ပိုးစိုးပက်စက်ချစ်သည်၊
ပက်ပက်စက်စက်ချစ်သည်၊ သောက်ကျိုးနည်းချစ်သည်၊ မှောက်ထိုးလဲချစ်သည်၊ အသံမြည်အောင်ချစ်သည်၊ ထိုမျှထိခြစ်သော်လည်း မင်မထွက်သော ဘောပင်အား လွှင့်ပစ်ရန်သာ သင့်တော့သည် မနေ့က
နင် online မလာဘူးနော် ငါ့စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးပဲ ငါထင်တာကနင်သေသွားပြီလားလို့ ငါ့မှာဖြင့် ပျော်လိုက်ရတာ.... ဟင့်...အခုတော့
နင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့........ တကယ်တော့ ပုံပြင် ထဲကလောက် ဘီလူး ဆိုတာ ရုပ်ဆိုး ချင်မှ ဆိုး မှာပါ အဲ့လိုပဲ နတ်သမီးဆိုတာလဲ ပုံပြင်ထဲက အတိုင်းလှချင်မှလှမှာပေ့ါ နင်ကတာ့တာဆို
ငါကဘိုင့်ဘိုင်ပဲ သေမလောက်ချစ်ရင်တောင် ခြေသလုံးဖက် ဆွဲမထားဘူး အသက်ရှူရပ်မတတ် နာကျင်နေရင်တောင် နင့်ရှေ့မှာငိုမပြဘူး မချစ်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး ငါ့မာနက ပြတ်သားတာပါ. အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားပုလိပ်ကိုဂိတ်မှာထား.ရဲလည်းမကြောက်ဘူး သရဲလည်းမကြောက်ဘူးနင်နောက်တယောက်ကိုချစ်သွားမှာဘဲ သတို
့သမီး အလိုရှိသည်). လှပကျော့ ရှင်း ဘော်ဒီတင်း ၍. ဂိမ်းဆိုင်နားနီးနီး. တိုက်ကြီး ကြီး. အဖေအမေ သေခါနီး. တစ်ဦး တည်းသောသမီ။ဖြစ်ရမည်။စိတ်ဝင်စားသူ အချက်အလက်နှင့်ပြည့်စုံသူ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။။။။။။။ :P$@+6......Π~<÷+
အပေါ်ယံခင်မင်သူတွေကို ငါ အကုန်ကြောက်တယ် အရာရာ အဆင်ပြေနေပြီဆို အာရုံနောက်တယ်လိမ်ညာမူ့တိုင်းမှာ အားနည်းချက်ဆိုတာ ရှိတယ် မသိခင်အချိန်ထိ ငါ ခေါင်းညှိမ့်နေခဲ့တယ် သိလာတော့ ငါ ခေါင်းခါတက်နေပီနော် Game ဆော့တယ် Counter ပစ်တယ် Red Alert တိုက်တယ် ဖဲရိုက်တယ် ဘာဖြစ်လဲ ကိုယ့်ဖာသာကို ဆေ့ာတာ ဘယ်သူ့ကို သံတော်ဦးတင်ရမှာလဲ ♥♥
! ♥♥ ! ♥♥ ငါ နင့်ကို ချစ် နေတဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ နင် တစ်ခြား တစ်ယောက်ကို ချစ်နေ မိမှာ ငါ အစိုးရိမ်ဆုံး ပဲ ♥♥ ! ♥♥ ! ♥♥ချစ်သူ...... ♥♥ မြွေကြီးလို.သာ နဂါးဖြစ်လာတာ တစ်ကယ်တမ်း ထောင်ပြစရာအမောက်မရှိဘူး လှုပ်ရှားနေလို.သာ ဘ၀လို.ခေါ်တာ ဖော်ပြစရာ အဓိပါယ်လည်းမရှိဘူး ချစ်လွန်းလို.သာ ချစ်သူတွေဖြစ်နေတာ အမြဲတွေ.ရတယ်ကိုမရှိဘူးး တိုင်တည်အပ်ပါသည် ချစ်သူထံမှ သစ္စာ တရားလေး ရနေလျှင် ကျွန်ုပ် သေပျော်ပါပြီ ရက်စွဲတွေ တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ထပ်ခဲ့တော့ အသက်ကြီးတာသာ အဖတ် တင်တယ် အချစ်စစ်ရှားပြီး အပြစ်အပြစ်တွေ များလာတဲ့ ဘ၀မှာ စိတ်ဓါတ်တွေလည်း ယိုင်နဲ့လို့ လျှောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ လမ်းလေးတောင် ပြန်လှည့်ကြည့်ချင်စိတ်ကမရှိလေတော့..... ငါမပျော်နိုင်သေးပါချစ်သူ အချိန်ဆိုတဲ့သမားတော်နဲ့ ငါ့နှလုံးသားကို ကုစားဖို့ရာ လေလွှင့်နေရဦးမယ်.... မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုယ့်ကိုချစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့စာမေးပွဲသာရှိလို့... ငါသာဖြေလိုက်ရင်.... အထာမသိ...လမ်းကြောင်းနားမလည်...ဂျောမနပ်... အကွက်တွေမပိုင်...ဗျုဟာတွေမနိုင်နဲ့... မာယာတွေမကျွမ်း...ဇာတ်ကြမ်းတွေပဲခင်းတတ်တဲ့ငါ... ........အဲ့စာမေးပွဲရမှတ်က..minus ပါပြနေမှာ.... သြော်လူတွေလူတွေ...ရုပ်ဝတ္ထုတွေနောက်အမှီလိုက်နေကြတာ... သူတို့နောက်မှာကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတွေ ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ... တစ်စက်စီပဲ့ကျနေတာ ကိုမသိကျဘူး... နင့်ရဲ့ သဘောတိုင်းပဲ နင်မချက်နဲ့ဆို ငါမချက်ဘူး နင်ပဲငတ်မှာလေ ဟုတ်ဘူးလား တခါတရံ သတိထားနေတဲ့ကြားထဲက မေ့နေတတ်တယ် တချို့အကြောင်းအရာတွေကြတော့ မေ့ချင်ပေမယ့် မေ့လို့ကိုမရဘူး၊ ခေါင်းထဲက မလိုချင်တာလေးတွေ ရှင်းထုတ်ပစ်ဖို့ တံမြက်စည်းတစ်ချောင်းသာ ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ပျော်မိမှာဘဲ။ သူငယ်ချင်းဆိုတာကိုကြားလိုက်ရချိန်မှာ ကျွန်တော်အဝေးဆုံးတစ်နေရာကိုရောက်ပြီးမှ ပြန်ရောက်လာတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။ ဖုန်းခေါ်မှတစ်ယောက်အသံ တစ်ယောက်ကြားရမယ်ဆိုရင်တောင် ငါဟာဖုန်းလိုင်းအောက်နေတဲ့ impossible connection လိုဖြစ်နေပါလား လက်တစ်ကမ်းမှာမြင်နေ ပေမဲ့အလှမ်းဝေးခဲ့ပြီ လရောင်ချိုချို အလွမ်းပိုပို တငိုငိုမဲ့... မျက်ရည်စက်စက် နှပ်တထွက်ထွက်နဲ့ သောက်လိုက်ရတဲ့ အရက်။ လွမ်းစရာကို နာစရာနဲ့ဖြေတဲ့ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ မနာနိုင်ခဲ့ပါဘူး... အဲဒီတော့ အမြဲတမ်းလွမ်းနေတာပေါ့။ တစ်ကယ်ပါ...ခဏလေးပဲ
အဲဒီခဏလေးမှာမင်းညာနေမှန်း ငါသိနေလည်း နောက်ထပ်ညာဖို့ငါတောင်းဆိုနေမိတယ်... ပထမအကြိမ်အညာခံရတာငါညံ့လို့ဆိုပေမယ့် ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ ငါသိပ်ချစ်လို့ပါ... ! ! ချစ်သူ.....................။ မင်းသာ social network တခုဖြစ်ခဲ့ရင်.......... ငါ ကျန်တဲ့ social network တွေကို Access Denied ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး User တွေ မင်းကိုပဲ သုံး အောင် ငါလုပ်ပေးပါမှာ ချစ်သူ.................။ *** ဘာ....... ငါ့ကို မုန်းတယ် ဟုတ်လား... ဟောဟိုမှာ အုတ်ဂူတွေ တွေ့လား.. ငါသတ်ထားတာ ၁၄၉၉ ယောက်ရှိနေပြီ.. ကျန်တဲ့တစ်ယောက် နင်ဖြစ်သွားချင်လား.. နင့်ငါ့ကို မုန်းတယ်လို့ ပြောရဲပြောကြည့်..* နင်မှားတာရှိရင်ဆောင့်ကန်ပါမယ် ... Yeah ... အို မင်းနောက်ကျောကိုလဲ ငါလေတံတွေးနဲ့ထွေးကာ ဖနောင့်နဲ့ပေါက်မယ် ... မင်းရဲ့ပါးကိုရိုက်နေချင်သေးရဲ့ ... နင်ကြောက်လို့မပြေးပါနဲ့ ... အရင်လိုနှိပ်စက်ခွင့် ပြန်ပေးဖို့တောင်းပန်တယ် .. ပထမအကြိမ်အလိမ်ခံရတာ လိမ်တဲ့သူအပြစ်... ဒုတိယအကြိမ်အလိမ်ခံရတာလဲ လိမ်တဲ့သူအပြစ် တတိယအကြိမ်အလိမ်ခံရတာတော့ ငါ့အပြစ်...... ငါတော်တော်$သုံးမကျတာပဲ ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲ...... နင့်ကိုဒီတစ်ခါခွင့်လွတ်မိရင် ငါ့ကိုယ်ငါဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ဘူး...... ငါကအရုပ်တစ်ရုပ်ပါဒါပေမယ့် မင်းကစားတာကိုပဲခံချင်တဲ့ မင်းလက်ထဲကအရုပ်လေးပါ
မင်းထားချင်ထားသွားပါ မင်းစိတ်ကြိုက်ကစားသွားပါ မင်းအလိုမရှိတော့ရင်တောင်ငါ့ကိုသည်းခံပီးတော့သိမ်းထားပေးပါ ~!~T_T (တစ်ချိန်တုန်း ကတော့ ငါက မင်းသားပေါ့ အခုချိန်မှာတော့ မင်းအတွက် လူကြမ်းဖြစ်ခဲ့ရပြီး) ချစ်ခြင်းမေတ္တာတ၇ားကို ခိုင်မြဲစေဖို့ “သစ္စာ”ထား၇မယ်ဆိုတာ မင်းနားလည်ပါတယ်နော်။ အ၇ှုံးအမြတ် သုံးသပ်တွက်စစ် မင်းအချစ်မှာ သစ္စာဆိုတာ၇ှိပါ့မလားစိုး၇ိမ်မိတယ် တောင်းနေ၇င် မပေးချင်ဘူး ပေးနေ၇င် မယူချင်ဘူး လိုက်နေ၇င် ပြေးချင်တယ် ၇ှိနေ၇င် တန်ဖိုးမထားဘူး အ၇ှုံးပေးပါများ၇င် အ၇ူးဖြစ်တယ် အဲဒါ အချစ်လား ရူပါ မလန်းလို့ မတူတာမှန်းတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ မူယာမကျွမ်း ကြူတာ မစွမ်းပေမယ့် မင်းအတွက်ဆို suparman လေးလို စွမ်းဆောင်ပေးမှာပါ။ အချစ်ဆိုတာကို စာလုံးပေါင်းတတ်ဖို့နေနေသာသာ အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတောင် မင်းနဲ့တွေ့မှ ပထမဆုံး ကြားဖူးခဲ့ရတာပါ....။ ချောတာတွေ လိုချင်ရင် မင်းသားတွေ ရှိတယ်..... ပိုက်ဆံရှိတာ လိုချင်ရင် သူဌေးသားတွေ ရှိတယ်..... အပြောချိုတာ လိုချင်ရင် ပွဲစားတွေရှိတယ်..... ချစ်တာကိုမှ လိုချင်ရင် ငါပဲ ရှိလိမ့်မယ်ချစ်သူ.....။ virus ဆိုတာ သတ်တတ်၇င် သေနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုပဲ......။ အချစ်ဆိုတာ ဖြတ်တတ်၇င် နေပျော်ပါတယ်။ လက်နှစ်ဖက်ကို တောင်ပံတစ်စုံလို ဖြန့်ကျက်ပြီး ပျော်နေချင်ပေမယ့် ငါ့ကမ္ဘာမှာ နင်မရှိတာ ၀မ်းအနည်းဆုံးပဲ နောက်ထပ်ဆုံနိုင်ခွင့်သာရှိသေးရင် ထပ်မခွဲဘူး အရောင်တွေ မခြယ်ပါဘူး ဆေးရောင်စုံကြားထဲက အဖြူရောင်သက်သက် ဆက်ချစ်မယ် နေ... တစ်ဘ၀မှာ တစ်ယောက်သာမင်း... အစဉ်အမြဲ ငါချစ်နေမှာပါ မလိမ္မာငါမိုက်လို့ ဝေးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေကို ပြောင်းလိုက်ချင်တယ် ဟောင်းသွားပေမယ့် မေ့ပြီထင်လား အသစ်ဆိုတာလည်း ရှိကိုမရှိခဲ့တာပါ ငါချစ်တာ မင်းတစ်ယောက်တည်းပါကွာ။ တကယ်လို့ သင်ချစ်တဲ့သူဟာ သင့်ကို မချစ်တော့တဲ့အခါ ၇ဲ၇ဲ၇င့်၇င့် လမ်းခွဲလိုက်ပါ ဒါဟာ ပျော့ပျော့ညံ့ညံ့လိုက်ကပ်နေတာထက်စာ၇င် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာ နင်ကများနာ့ကို ချစ်တယ်တဲ့ နင်ကောင်မလေး ဘယ်နှယောက်ကို ပြောပြီးပြီလဲ ငါက နင့်ရဲ့ နံပါတ်စဉ်တော့ သေတောင်မဖြစ်ဘူးနားလည်........... ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတောင် ကိုယ်မပိုင်တာ သူများရဲ့စိတ်ကို ပိုင်ဖို့မကြိုးစားချင်ဘူး.... စိတ်ဆင်းရဲရလွန်းလို့.... ဧ၀ကချစ်စရာမရှိလို့ ..အာဒမ်ကိုချစ်ခဲ့ တာာ… ငါ့မှာကချစ်ရမဲ့ သူအများကြီး ထဲကမှမင်းကို ရွေးချစ်မှာနော်. . မင်းစိတ် ကူးမလွဲနဲ့ နော် ..သိလားးးးး ...... ဟိဟိ.(နာတွ) အချစ်ကို ၀ယ်ယူခွင့်မရှိဘူး အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တော့ရှိတယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့အချစ်မှာ နှလုံးသားပါလာပါစေနော် ... ငါ၇ဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့..... ချစ်ခြင်းများစွာနဲ့..... နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ I LOVE YOU.....။ ကိုယ်လိုချင်သလောက်ကို.... သူများကိုအ၇င်ပေးလိုက်ပါ။ ချစ်သူရယ်မင်းကိုနားလည်ပေးရလွန်းလို့လည်း....... ငါ့နားရွက်တောင် ငါရှာမတွေ့တော့ဘူး .....။ နင့်ရင်ခွင်ထဲမှာ****ငါ့ထက်ချစ်ရမဲ့လူ*** ရှိလာမဲ့တစ်နေ့****မမုန်းပစ်ပဲ****ထားရစ်ခဲပါ *****မမေ့ပစ်ပဲ****ကျောခိုင်းသွားပါ***** တခြားတစ်ယောက်ကို****ရင်ခွင်ထဲထား**** ခပ်ပါးပါးလေးပဲ****(ငါ့ကို) သတိရပေးပါ မင်းငိုချင်သလောက်ငိုပါ ဒါပေမယ့် ငါ့ပခုံးလေးဖြစ်ပါစေ မင်းပျော်ချင်သလောက် ပျော်ပါ ငါအဝေးကကြည့်မှာပါ နေချင်သလောက်နေပါ မပျော်ရင်ပြန်လာပါ ပြန်လာမှ အတိုးကောအရင်းကောပေါင်းပြီး နှစ်ဆတိုးနဲ့ မင်းကိုချစ်ပစ်မယ် ဘာ..ပြိုင်ကားလှလှလေးနဲ့ လာမချုပ်နဲ့ ဟုတ်လား ပြိုင်ကားမပြောနဲ့ နင့်ကို ဆိုက်ကားနဲ့ တောင်လာမချုပ်ဝူး.. စိတ်ကူးလဲယဉ်တက်ပါပေ့..ဟက် လူတွေပါးစပ်ဖျား ရေပန်းအလွန်စားတဲ့.. သူရဲကောင်းတစ်ယောက် မဖြစ်ချင်နေပါ.. ချစ်သူလက်တစ်ဖက် တသက်တာကိုင်ဆွဲခွင့်ရှိတဲ့.. မထင်မရှား သာမာန်လူသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်လေ.. တကယ်ဆို နင့်အတွက် ငါက ဘာမှ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး..ဒါပေမယ့်..အဲဒီဘာမှ မဟုတ်တာလေးကိုပဲ...ငါသေသေချာချာ...သိမ်းထားပါရစေ...နင့်ကိုသတိရမိတိုင်း ..မကြာ..မကြာထုတ် ထုတ်ကြည့်ချင်မိလို့ပေါ့... ဘယ်သူမြင် ဘယ်သူသိမှာလဲ..သူရှိတယ် ကိုယ့်ရင်ထဲ....အမြဲငြိတွယ်.... တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်မှာ အားလပ်ချိန်မ၇ှိဘူးဆို၇င် သူမအားလပ်ချင်လို့ဖြစ်တယ် တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်ဟာ မသွားနိုင်ဘူးလို့ဆို၇င် သူခွဲထွက်မသွားချင်လို့ဖြစ်တယ် တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်မှာ ဆင်ခြေတွေသိပ်များနေပြီဆို၇င် သူအလေးမထားတော့လို့ဖြစ်တယ် အချစ်ဆိုတာ အသစ်မလာခင်ထိပဲရူးသွပ်တာပါ အသစ်လာတော့ မင်းကရယ်စရာပေါ့ မာနကြီးမနေနဲ့ ငါအသစ်မတွေ့သေးလို့ သည်းခံနေတာ မော်ဒယ်လ်ဖြစ်ရေး လေ့ကျင့်ပြေး လေ့ကျင့်ပြီးတော့ ဗိုက်တွေဆာ သုံးပန်းကန်ကြီးတောင် ဝါးလိုက်တာ... မပိန်လို့တဲ့ စိတ်တွေပျက် ညစာ လုံးဝဖြတ် ညကျဗိုက်ဆာ မနေသာ ပေါင်မုန့်လေးလုံး ဝါးပစ်တာ ငါးလကြာတော့ ဝိတ်တွေတက် လှယဉ်ကျေးမယ်ဝက်။အားတိုင်းဂိမ်းဆော့တယ်များမှတ်နေလား။ မအားလည်း ဂိမ်းဆော့တယ် မှတ်ထား။ ချစ်သူက ထမင်းဆို ကိုယ်က ဟင်း ဖြစ်ချင်တယ် ချစ်သူက အလောင်းကြီးဆို ကိုယ်က အကောင်းကြီး ဖြစ်ချင်တယ် :D ဘာမှမရေးထားဘူး
ဖတ်တဲ့ လူ အရူး.. .စွေစောင်းကြည့်သူ အပေါ. ဖတ်ပီး မဖတ်မိချင်ယောင်ဆောင်သူ ကြပ်မပြည့်... .ရီတဲ့ လူ ငါ့ချစ်သူ... ကူးတင်တဲ့လူ ငါ့ရီးစား.... ကျိန်ဆဲ တဲ့ လူ ....လင်းတဖြစ်ပါစေ.....xP အမာရွတ် ရဲ့မလှပခြင်းကို...ဒဏ်ရာရဖူးသူပဲသိလိမ့်မယ်.... မျက်ရည်ရဲ့ ပူလောင်ခြင်းကို....ငိုဖူးသူပဲ သိလိမ့်မယ်.... မြန်မာပြည့်မှာနေသော..အင်တာနက်သုံးနေသောသယ်ချင်းများဟာ. .လူဘ၀သက်တမ်ကို.၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ..၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ...loading နဲ့သာကုန်ဆုံးစေသည်. :) လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ်လို့ သိတဲ့ အချိန်ဟာ အဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ ဝေးနေတဲ့ အချိန်ရယ် လမ်းခွဲသွားခဲ့တဲ့အချိန်ရယ်ပဲ လို့ထင်တယ်~ :D တစ်နေ့နေ့မှာ နင့်ကို သိပ်ချစ်လွန်းလို့ ငါ့အမှားတွေ များလာတဲ့အခါ နင်ငါ့ကို စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ဒါတွေဟာ ငါနင့်ကို သိပ်ချစ်လို့ ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို နင်နားလည်ပေးပါ။ မိုးမိုးကပြောတယ် ငါမှားလား မင်းမှန်လားတဲ့200 လင်းလင်းကပြောတယ် ငါ့ဘက်ကမှားတာပါတဲ့G-Latt ကပြောတော့ နှစ်ယောက်စလုံးမှားခဲ့ တယ်တဲ့300 အခုတစ်ယောက်လာပြန်ပြီ ငါမှားတာရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ ........... “ အရင်ကဆိုသူငယ်ချင်းတွေရှိရင် ဘာမှမလိုအပ်တဲ့ငါ အခုတော့ သူငယ်ချင်းတွေရှိနေပေမယ့် နင်မရှိရင်မနေတက်တော့ဘူး .... :(နင်နဲ့ နည်းနည်းလေးမှ ဝေးမနေချင်တော့ဘူး ကွာ .... : မင်းအတွက်ဆို ဆေးရုံနဲ့ရဲစခန်းလို အမြဲတမ်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နှလုံးသားထဲကို အများသုံးအိမ်သာလို ဝင်ချင်တိုင်းဝင်ထွက်ချင်တိုင်းထွက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဗုံးမထောင်ခဲ့ပါနဲ့:P online ပေါ်မှာ ကျွန်ုပ် အလုပ်ချင်ဆုံးအလုပ်ကတော့
ချောင်အနီးမှာလ မောင်ကြီးကို တစ္ဆေကိုက်လိမ့်မယ်
ဝ" မရှိ ၀ိမလုပ်နဲ့ ဝ၀စား ဝေးဝေးနေ ဝါးတားတားနဲ့
ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ပြီး ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့ဝင်မရှုပ်နဲ့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး ဝိုက်ထည့်လိုက်လို့ ဝဲတွေပေါက်ပြီး ဝရုန်းသုံးကားဖြစ်သွားမယ်.. :3: :3: :3:
တစ်နေကွယ် သေနယ်သို့.... တစ်ခါကူး...... မေ့လျော့က သေဘူးထင်ပါနဲ့...... နေကွယ်တာ အခါများရင်ဖြင့်...... သေရွာကွယ် တစ်ကယ်သွားရပါလိမ့်..... တားမရဘူး.............။
လင်းလင်း က ငါ့ဘက်က မှားတာပါ တဲ့ G-Latt က နှစ်ယောက်စလုံး မှားခဲ့တယ် တဲ့ အောင်လ က မှားတာ ရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ် တဲ့ ငါ ဘာလုပ်ရမှာလည်း.....
လုပ်တဲ့အလုပ်က နောနော်(အကန့်အသတ်မရှိ) ရတဲ့လစာက ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း (မက်လောက်စရာ တစက်မှမရှိ) အိုဗာတိုင်းက လေးဖြူ (မရေရာဘူး) အလုပ်ဆင်းတဲ့အချိန်က မျိုးကြီး (အိမ်ပြန်ချိန်ကိုတောင် မသိတော့ဘူး) မြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့တာလည်း မဟုတ်ဘူး.. အနေနီးလို့ချစ်သွားတာလည်း မဟုတ်ဘူး.. အပြောကောင်းလို့ခိုက်သွားတာလည်း မဟုတ်ဘူး.. နှလုံးသားကချစ်လိုက်ဆိုလို့.. ချစ်ခဲ့မိတာ............
မန်းလေးသူ မန်းလေးသားကွ လူပိန်တယ် လက်သီးပြင်းတယ် စိတ်ဆပ်တယ် အကြွေးမဆပ်ဘူး ငါးမွေးတယ် အစာမကျွေးဘူး ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူး တပည့်၆ ယောက်ရှိတယ် ဗလ မရှိပေမဲ့ ဇရှိတယ် အကောင်သေးပေမဲံ့ နှစ်ကောင်ပေးတယ် :3: :3: :3:
အိပ်ပျော်နေတဲ့ငါ့နှလုံးသားကို တမင်သတ်သတ်ခလုတ်တိုက်ပြီးမှ ဆော်ရီးလို့ပြောပြီး ထွက်သွားမလို့လား..............
မရဘူးကွာ ချစ်မှာပဲ....... အသည်းကွဲနေရင် ခေါက်ထားလိုက် ရည်းစားရှိရင် လမ်းခွဲပေး စေ့စပ်ထားရင် ဖျက်သိမ်းလိုက် လက်ထပ်ထားရင် ကွာရှင်းပေး ကလေးရှိရင် ပြန်အမ်းလိုက် ရှင်းတယ်နော်.... တက်လားအစ်မ ... ၇လားအစ်မ...တက်လာပြီလား အကို ... ရသေးလားညီလေး ... မ၇တော့ဘူးလား ညီလေး...ကျနေပြန်ပြီလား .. ဟော တက်လာပြီ ... ဟယ်ခုပဲ ကျသွားပြန်ပြီ....လှေစီး နေခြင်းလည်း မဟုတ်... သဘောင်္ မုန်တိုင်းမိနေခြင်းလည်းမဟုတ်........ ကွန်နရှင် အကြောင်း ပြောနေခြင်းသာဖြစ်ပေသည်ကား IdIe ဆိုတော့ဘယ်နေ့ အသုဘချမှာလည်း ... VIP only ဆိုတော့ဦးသန်းရွေနဲ့ ချက်နေတာလား ... Busy နေရင်onlineတက်မလာနဲ့ စောင့်ကန်ချခံရမရ် ... Not here ဆို တစ်ခါထဲ sign out လုပ်သွား ... ဟွန့် ~~~ လက်ပြန်နဲ့ ရိုက်လိုက်လို့ လိုင်စင်ပုံကောင်းကောင်းထွက်သွာမယ်... ငါ့နှလုံးသားက ရယ်နေတဲ့ ငါ.နှုတ်ခမ်းကိုပြောတယ် သူလဲပျော်ချင်တယ်တဲ.... အဲဒီတော. မျက်ရည်လည်နေတဲ. .... ငါ.မျက်ဝန်းက ငါ.နှလုံးသားကို ပြန်နှစ်သိမ်.တယ် ...... သူလဲဟန်ဆောင်နေတာပါကွာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကကျဉ်းလှတယ် ………… Net လောက်သူမကျယ် Internet ကအကျယ်ဆုံးထွက်ငွေတ၀ုန်းဝုန်း…….။ စာပို့သမားလေး G.mail ဟာ ……. စာပို့ရာတွင်အလွန်သေချာ ကိုသာဇံ Software သမား ………… Download လုပ်ဖို့သူကြိုးစား ရဲသားကြီးက Kaspersky ……….လူဆိုးဖမ်းရာတွင်တာဝန်ကျေသည် ကိုဖိုးမောင်နှခေါင်းသမား ………… Sexy site တွေသူလျှောက်သွား ဦးသာထူးက Hardware ဆရာ ………… နည်းပညာသစ်တွေသူလေ့လာ တို့ဆိုင်ရှင်မခင်မြ………….ငွေတောင်းရာတွင်ရက်စက်လှ ဘယ်သွားနေလဲ မောင်ရေခဲ……………….. Internet ဆိုင်ကိုသွားလို့ဆို ..။ ဘာသွားလုပ်လဲမောင်ရေခဲ ………………… ပညာသတင်းစုံလေ့လာကုန် …။ဲ ဘာသိခဲ့လဲမောင်ရေခဲ ………………… ခြင်ကိုက်လိုင်းစုတ် Connection ပြုတ် ။ ဘယ်လောက်ကုန်လဲမောင်ရေခဲ……………. တစ်နာရီ (၅၀၀)မတန်ပါ ။ မောင်တို့မယ်တို့Net ဆိုင်ဝင်……အပြုံးပန်းကိုဆင် Connection တော်တော် ..လေး……ညီညီညာညာနှုတ်ဆက်ပြေး ………။ ၀ဲ company ထောင်ထားတာလားတော့မသိဘူး ၀ဲတွေပဲပြောနေတယ် ဧကံမဟုတ်မှလွဲ ဆွဲနေပြီထင်တယ် ခိခိ Online ပေါ်တက်ပါလို့ …………… Website ထဲဝင်လိုက်ရင် Policy ကာရံထားလို့ဘာမှကိုမမြင်……….. Bamar Net ရဲ့ Connection အခြေနေရယ်မကောင်း …….. စိတ်ညစ်ပါကြောင်း ။ ခံစာချက်တွေကိုဖွင့်ပြောနေလို့လည်း....... မင်းသိမှာမို့လား.............ငါရင်တွေကွဲသွားတော့လည်း မင်းသိမှာမို့လား...........ဟန်မဆောင်တန်းပြော၇ရင် မင်းမှာစာနာနားလည်တတ်တဲ့........... နှလုံးသားမှမရှိတာ.............ဟုတ်တယ်မလား၊ ချစ်သူ................ ရင်ထဲကအချစ်တွေ နင်သိပါစေ...ငါမှားတာများခဲ့ပေမဲ့ အလိမ်အညာတွေမပါခဲ့ပါဘူး။ ဖွင့်မပြောခဲ့တတ်တဲ့...ငါ့ရင်ထဲမှာ စကားလုံးတွေမှိုတက်နေပြီ... ငါအိုသာသွားမယ် ငါ့ရင်ထဲကအချစ်တွေ ဘယ်တော့မှပြိုမသွားဘူး.. အပိုတွေမဆိုတတ် လိုအပ်တာမင်းတစ်ယောက်ထဲ... အရှုံးတွေပွေ့ဖက် အမုန်းတွေခံယူရင်း.....ရှေ့ခရီးကိုတယောက်တည်းဆက်..... ဒီကမ္ဘာမှာ ငါသိပ်ချတာ(၂)ယောက်ထဲ... မင်းရယ် ငါရယ်။ ဘယ်သူကိုပိုချစ်လဲလို့ မမေးနဲ့ ... .... ဒုတိယနေရာကို ငါရောက်သွားလိမ့်မယ် . . . x(( ခုခေတ်ကောင်လေးများဧ။်သီအိုရီ ... လွမ်းတယ် ( ပိုက်ဆံပြတ်ရင် ) ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ် ( မင်းရဲ.ဘဏ်စာအုပ်ကို ) အရမ်းချစ်တယ် ( မင်းရဲ.ပစ္စည်းဥစ္စာ ) သတိရတယ် ( ၀ယ်စရာတွေ.ရင် ) စော်လား မနေ့ကပဲဆုံးတယ်....ဟင် ရည်းစား ဟုတ်လား... မနက်ဖြန်ရက်လည်လေ...ချစ်သူကိုတော့မမေးနဲ့.... သူများတွေလုမှာစိုးလို့...ေ၇ခဲတိုက်ထဲမှာ...လုံလုံခြုံခြုံထားထားတယ်... VALENTINE DAY မှာ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်စရာဆိုလို့ Monitor ရယ်.တယုတယကိုင်စရာဆိုလို့ Keyboard ရယ်..လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာဆိုလို့ Mouse ရယ် တီတီတာတာလေး ဆိုလို့ မီးပျက်ရင်အော်တဲ့ UPS …ပဲရှိတယ်… အဆင်းရဲဆုံးလူဆိုတာပိုက်ဆံမရှိတဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့ လူကိုပြောတာပါ။ဘာ!!!လမ်းခွဲကြမယ်ဟုတ်လားးနင်ကအခုမှဒီစကားကိုပြောထွက်တာလားးငါ့မှာတော့.. နင်ဘယ်အချိန်ဒီစကားပြောမလဲလို့စောင့်လိုက်ရတာ….ကျေးဇူးပဲဟာ.. ဒီလိုလမ်းခွဲမှပဲငါလဲနောက်တစ်ယောက်တွဲလို့ရမှာ…:P ဟူးးးးကျောင်းကအပြေးအလွားပြန်လာပီးသူ့အကောင့်လေးကိုကြည့်လိုက်တာ ..offline တဲ့လေ..သွားပါပီ..ဒီညတော့ငါ့အိမ်မက်လှလှလေးတွေပျက်ကုန်ပါပီဟာ… လူဆိုးစစ်စစ်တွေက ကြောက်ဖို့မကောင်းပါဘူး... လူကောင်းအတုတွေသာ ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ရတယ်ဒါသဘာဝဘဲ လူပါးတော့လာမ၀နဲ့ နင့်ထက်သာတာရှာပြမယ် အဲ့ခါကျမှငါ့ရှေ့ခ၀ါမချနဲ့ ငါ့မှာလဲမာနနဲ့ အထာတော့လာမကျနဲ့ ပြာကျမယ်... Gtalk ထဲက ကျူကျူများ ´ငမွဲရုပ်ဆိုးဝဲစား´နဲ့ တိုးပါစေမပြောဘဲနဲ့ block လုပ် Gtalk ´ဗိုင်းရပ်စ်´ ကိုက်ပါစေနှုတ်ဆက်တာကို စာမပြန် ´ရုပ်ဆိုးကြီး´ ဖြစ်ပါစေမာနကြီးသော ကိုကိုများ ´ငှက်ပျောတုံး´နဲ့ ညားပါစေBusy နေတယ်ပြောသူများ ´အလုပ်´ ပိပြီးပြားပါစေAsl လိမ်, ညာသူများ ပါးစပ်မှာ ´၀ဲ´ ပေါက်ပါစေမိန်းကလေးယောင်ဆောင် Chat သူများ ´Gay ´စစ်စစ်ကြီးဖြစ်ပါစေOnline ပေါ်က ´ငါ့ချစ်သူ´ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။ -သြော်g talkမှာချက်ရင်း..မင်းphoto လေးကြည်.ရနိုး နဲ.စောင့်လာခဲ့တာတစ်နှစ်ျေက်ာတောင်ကြာခဲ့ပြီ..ခုတော့မင်းမျာလည်းကလေးတွေနဲ. ...ငါ့မှာလည်း အကြွေးတွေနဲ.။-ဆေးလည်း
အတူချမယ်.... Club လည်းတူသွားမယ်... Junction 8 ထဲ ဗုံးတူတူဖောက်မယ်..... နင်နောက်ကျရင် နင့်ကိုဖမ်းမယ်.... ငါနောက်ကျရင် ငါ့ကိုဖမ်းမယ်.. မညစ်ပါတ်ကြေး ထွက်မပြေးကြေးဟေ့... (အားလုံးပဲ ပျော်ပဲ ပျော်ရွှင်ပါစေ)..............။
မှတ်ချက်။ ဖူးစာရှင်လေးဆိုက်မှ ကူးပြီးပြန်လည်မျှဝေပေးကြောင်း။
အသစ်တင်တိုင်း mail ထဲပို့ပေးပါမည်...။
♫♪♫ တစ်ပတ်အတွင်း အကောင်းဆုံး အဖတ်များဆုံး ပိုစ့်များ ♫♪♫
လူအများ သုံးနေတဲ့ Wireless Connection တခုကို မိမိ တဦးတည်း လိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နည်း။
Wireless Connection တစ်ခုကို ဆယ်ယောက်လောက် အတူဝိုင်းသုံးနေတယ်..အဲဒါဆိုရင်လိုင်းကတော့နှေး နေမှာပါ..ဒီလို ၀ိုင်းသုံးနေတဲ့ကြားထဲကမှ အဲဒီအ...
INCREASE WIFI Speed Booster (အများသုံး Wifi ကို ကို့ဖုန်း လိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လိုင်းအား ဆွဲတဲ့ဆော့ဝဲလ်)
အခုတင်ပေးထားတာက Andriod ဖုန်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Wifi လိုင်းအား ကို မူလထက် ပို ဆွဲ နိုင်တဲ့ Wifi ဆော့ဝဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ စားသောက်ဆိုင်ဖြစ...
December 2, 2013 နေ့က Viber အသစ် Update လေး ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခု အသစ်ထွက် တဲ့ Viber ရဲ့ ထူးခြားချက်က ဖုန်း Free Call ရင် အ...
November 12, 2013 နေ့က Viber အသစ် Update လေး ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခု အသစိထွက် ထဲ့ Viber ရဲ့ ထူးခြားချက်က ဖုန်း Free Call ရင် အသ...
MRTV LIVE နှင့် MWD LIVE တို့ကို Andriod ဖုန်းထဲကနေ အဆင်ပြေပြေကြည့်ကြရအောင်
MRTV LIVE နှင့် MWD LIVE တို့ကို ဖုန်းထဲကနေ အဆင်ပြေပြေကြည့်လို့ရမယ့်နည်းလေးလာပါပြီ။ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲံလေးကိုတော့ ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ...
ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် ချင်သော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် CyberLink PowerDirector 12 Multilingual Full Version လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီ...
Video တည်းဖြတ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ တည်းဖြတ် ဆောဝဲ CyberLink PowerDirector နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်...
လူတိုင်း ကွန်ပြူတာ သုံးတာ ကြာလာရင် မျက်လုံးအောင့်လာတာ မျက်ရည်ကျလာတာတွေ ဖြစ်လာရင် ဒီဆော့ဝဲလ် လေး သုံးစမ်းကြည့်ပါ။
f.lux™ v3.10 ကွန်ပြူတာသုံးတာ ကြာလာရင် မျက်လုံးက အောင့်လာတာ မျက်ရေကျလာတာ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု f.lux...
ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် ချင်သော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် CyberLink PowerDirector 11 Ultra လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ဖြတ်တော...
♫♪♫ အလည်လာသော သူငယ်ချင်းများ မန်ဘာ ၀င်သွားကြပါနော် ♫♪♫
ဒီနည်းလေးးကတော့ ဆိုက်တဆိုက်ကနေတွေ့လို့ ကျနော်ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ...။အသုံးဝင်မယ်လို့ လည်း ထင်ပါတယ်..။ကျနော်ကိုယ်တိုင်က အင်တာနက်ကို fre...
Playstore မှ ဒေါ်လာနှင့် ၀ယ်ရသော application တွေကို free ဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးပါ။
Playstore မှ ဆော့ဝဲလ် တော်တော်များက ဒေါ်လာ နဲ့ ၀ယ်ယူရပါတယ်။ အဲတာတွေကို Free ဒေါင်းယူ နိုင်တဲ့ Blackmart Market နောက်ဆုံးထွက်လေးကို တင်ပေး...
Andriod ဖုန်း ဗီဒီယို ကာရာအိုကေ စာတန်းထိုးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် X Video Editor v1.4.3 Andriod ဖုန်းနဲ့ ဗီဒီယို ကာရာအိုကေ စာတန်းထို့ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် X Video Editor လေးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ X Video Editor က စာတန်းထို...
Android ဖုန်းတွေမှာ သီချင်းဖွင့်နားထောင်လို့ အသံတိုးနေတယ်ဆိုရင် Sensor Music Player လေးကိုသုံးကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ရိ...
♫♪♫ ပြောချင်တာ မှာချင်တာ ရှိရင်ဒီမှာ ပြောသွားပါ ♫♪♫
♫♪♫ www.zawminthan.com ♫♪♫
♫♪♫ အလည်လာရောက်သူများ ♫♪♫
Copyright © 2013. ဇော်မင်းသန်း